Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance Samir Nasri Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Zidane encane". Indaba yethu ye-Samir Nasri Ubuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe ahlasele kodwa abambalwa bacabange nge-Bio yethu ye-Samir Nasri ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
I-Samir Nasri Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
USamir Nasri wazalwa on Usuku lwe-26th ka-June 1987 enyakatho yedolobha laseMarseille, eFrance. Wazalwa nonina, u-Ouassila Ben Saïd (umama wendlu) nobaba, uHamid Nasri (owayengumshayeli webhasi ne-agent agent yebhola).
Ngesikhathi ekhulela eLa Gavotte Peyret, uNasri wakhulela umdlalo webhola esemncane. Wayedlala imidlalo njalo emgwaqweni lapho efunda amakhono akhe amaningi. Lapho ezwa ithalenta lakhe elihle, abazali bakhe basayina ukuba badlale neqembu lendawo edolobheni lakubo. UNadri wachitha unyaka owodwa edlala neqembu laseLa Gavotte Peyret ngaphambi kokuthuthela ePennes Mirabeau esiseduzane neMirbeau eneminyaka engu-7 njengoba kuchazwe ngezansi.
I-Samir Nasri Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
Ngesikhathi edlala noPennes, uNasri wathola uMoses Freder Assolen, owayesolwa ngethalente lomdlali ngokusebenzisa igama lomlomo. Ngemuva kokuqaphela ikhono likaNasri ngomuntu, u-Assolen ujoyine lo mdlali ukuthi ahambe neqembu labanye abadlali abasha abase-Italy ukuba bahlanganyele emncintiswaneni wezintsha lapho bezodlala khona ngezemfundo zaseMilan naseJuventus.
U-Nasri umxhwele kulo mqhudelwano kanti u-Assolen wayetshelwa ngeso lengqondo ngecala laseMilan ukuthi "[uNasri] uhlala lapha, uyamshiya". Ngemva kokubuyela eFrance, izikhulu zaseMarseille zahlela umhlangano nobaba womdlali futhi iqembu lavuma ukuvumela ukungena kuka-Nasri esikoleni sika-club eneminyaka eyisishiyagalolunye.
Lapho engena esikoleni samasha saseMarseille, uNasri washesha wahlaba umxhwele. Ngenxa yokuqhubekela phambili kwakhe okusheshayo, uNasri wayeyingxenye ebalulekile yeqembu leqembu elilodwa eliyingxenye yokuwina ama-trophies amaningana. Ngesonto elilodwa, naphezu kokusayina isivumelwano sokwenza isivumelwano noMarseille, uNasri waxhunyaniswa ne-Premier League club Arsenal. Wanikezwa isamba se-8 - ngaphambili egqoke izingqungquthela zase-Arsenal zangaphambili u-Ian Wright noFreddie Ljungberg. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Samir Nasri Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Love ingenye yemizwelo ejulile eyaziwa ngabantu. Kunezinhlobo eziningi ukuthanda, kodwa iningi labantu lifuna ukukhuluma kwalo ngothando ubuhlobo nomlingani ohambisanayo. Lona uhlobo luthando lukaSamir futhi ube nabesifazane okungenani abangu-5 eminyakeni eyi-10 edlule kusukela ekubhaliseni.
USamir waqala ukukhuluma no-Aymee Davison ngesikhathi sakhe eMarseille. Ubuhlobo babo buhlala iminyaka engaba ngu-3. Bobabili abathandi bahlukana ngo-2008, unyaka asayine ngawo u-Arsenal.
Ubudlelwano ne-Star Tennis yasekuqaleni; Ngesikhathi sakhe sonke e-Arsenal, uSamir ukhuluma ngeFrench Tennis Star, uTatiana.
Yile ndlela abahlangana ngayo: U-Miss Golovin waphoqeleka ukuyeka ukudlala i-tennis ku-2008 ngenxa yokuvuvukala emuva, okuvele kwenzeke ukuthi kuhambisane nomzuzwana lapho uSneakery loverboy uSamir eshaqile edolobheni esuka e-UK. Waya ngqo ukumcela ngaphandle futhi wavuma ukumbamba naye.
U-Tatiana Golovin wayengumdlali othembisayo we-tennis kusukela esemncane owazalwa eMoscow futhi wathuthela eFrance nabazali bakhe njengengane encane. Ubuhlobo babo buphela ngemuva kokuthi uSamir Nasri washiya i-Arsenal.
Phakathi nesikhathi sakhe eManchester City, uSamir Nasri wabhala iBritish Model Anara Atanes.
Ubuhlobo babo baqala ngo-2012 futhi baphela ku-2015.
Ubuhlobo noLindsay Lohan: Ngemuva kobuhlobo bakhe no I-British Model U-Anara Atanes waphela, uSamir waqhubeka edumile ngezidumi ezidumile. Lesi sikhathi, ukuya kwakhe kwakuyi-United States.
Le ncwadi ngezansi isebenzisa izithombe ezivela eParis Fashion Week ezikhombisa ukuthi uNasri noLindsay Lohan badlwengula kanye noNasri bebonakala bencike ekumangeni umdlali.
Umbiko womphakathi uqhubeka uthi labo ababili bajoyine i-Paris nightclub Rasputin kuphela ngaphambi kokushiya ndawonye ngo-5 am.
Izindaba zobudlelwane bazo zafika njengenhlanhla ku-intombi yakhe, u-Anara Atanes owayesebekele kakhulu inkanyezi yaseManzini yangaphambili. Uke wabeka izihloko ngemuva kukaDidier Deschamps wehlisa uNasri eqenjini lesizwe laseFrance mayelana nokuthunjwa kweNdebe yoMhlaba yaseBrazil. U-Anara Atanes walwa nendoda yakhe ngokushicilela umdlali wangaphambili weCentral (uDidier Deschamps) njenge "Umphathi we-** ku-Twitter futhi uthi: "F ** k France futhi f ** k Deschamps! Yini njengoba ** umphathi! "
Kamuva waxolisa kuDeschamps naseFrance iFrance ngemuva kokusongela yena futhi, ngemuva kokubona uSamir Nasri wamshiya uLindsay Lohan.
Ubuhlobo noSofia Richie: Ngemuva kokuba ubuhlobo bakhe obufushane noLindsay Lohan buphelile, uSamir Nasri waqala ubuhlobo noSofia Richie, oyimodeli yezemfashini.
U-Sofia ubelokhu evezwe emikhankaso ngezimpahla eziningana ezihlanganisa uTommy Hilfiger, uMichael Kors noChanel. Ku-2016, wayehlelwe ngamahemuhemu ukuba abe nesibindi noSamir Nasri.
U-Sofia Richie uyisimo esiphakeme se-bae futhi uye waba nobuhlobo noLee Hamilton (2017), eBrooklyn Beckham (2016 - 2017), Justin Bieber (2016), Jake Andrews (2016), Miles Canter (2014 - 2015) noJaden Smith ( 2012 - 2013).
I-Samir Nasri Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
USamir Nasri unezici ezilandelayo zobuntu bakhe.
Amandla kaSamir: Uzimisele, ucabange kakhulu, angokomzwelo futhi anethonya kakhulu ebuhlotsheni bakhe.
Ukuntuleka Kwe-Samir: Ungase abe esolisayo, ekhohlisayo, enesisindo futhi enganaki.
Yini uSamir ayithandayo: Ukuba othandweni, ukufihla, ukuzijabulisa ekhaya, ukuphumula eduze noma emanzini nokudla okuhle nabangani
Yini uSamir ayithandiyo: Ukuhlazeka, ukuveza impilo yomuntu siqu nokungahambisani nenhliziyo yakhe.
Ngokufingqa, uSamir unomzwelo futhi uzwela kakhulu, futhi unakekela kakhulu ezintweni zenhliziyo yakhe kunezinye.
I-Samir Nasri Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
Izizwe zaseFrance ezivela emadolobheni ase-Algeria ezake zasebenzisa isizinda somndeni ophansi. Unina, u-Ouassila Ben Saïd, nobaba, u-Abdelhafid Nasri, bobabili bazalwa eFrance; ubaba wakhe wazalelwa futhi wakhulela eMarseille, kanti unina usuka eSolon-de-Provence eseduze.
Kwakungomkhulu ka-Samir Nasri owafudukela eFrance esuka e-Algeria. Njengoba kushiwo ngaphambili, unina ungumama wendlu ohlale ematasa nemisebenzi yakhe yasendlini yansuku zonke. Ubaba wakhe ngaphambilini wayesebenza njengomshayeli webhasi ngaphambi kokuba abe ngumphathi wendodana yakhe. Ngaphansi kwesithombe seyise kaSamir Nasri.
USamir nguye omdala kunazo zonke izingane ze-4 zabazali bakhe futhi wembule ukuthi ungumSulumane ongeyena owenzayo. Unodade osemncane namawele amabili, okuyiSonia, Malik & Walid, ngokulandelana. Yonke i-4 yakhuliswa ku-La Gavotte Peyret.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Samir Nasri Childhood kanye namaqiniso angabonakali we-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.
Ousmane Dembele Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts